Otutu ihe gbawara gbawara etiti Moscow, ekwuputara mmerụ ahụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Otutu ihe gbawara gbawara etiti Moscow, ekwuputara mmerụ ahụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Otutu mgbawa gbawara na etiti Moscow
Ọkụ ahụ, nke gbasara ebe karịrị 5,000 square ụkwụ, chọrọ nnukwu ọrụ site na ọrụ mberede.
Nnukwu ọkụ gbara na ụlọ nkwakọba ihe pyrotechnics dị na etiti Moscow.
Nnukwu obere mgbawa na-eme ma n'ụlọ ma na mbara igwe dị n'elu ya.
Buildinglọ ahụ na-ere ọkụ dị n'ofe Osimiri Moscow site na Gorky Park.
Oke oku gbara na ulo nkwakọba ihe nke pyrotechnics dị na etiti Moscow taa, na-ebute ọtụtụ ihe ọkụ ọkụ ma merụọ mmadụ anọ ahụ.
Vidio ndị ndị ji anya ha hụ ihe merenụ gosiri ka anwụrụ ọkụ na-akwụgo n’ofe obodo ahụ na nnukwu anwụrụ ọkụ na-acha ntụ ntụ n’etiti isi obodo Russia na-amụsi ọkụ, nke dị n’oké okpomọkụ.
Ihe onyonyo gosiri obere obere ihe gbawara na-eme ma n’ụlọ ma n’eluigwe.
Lọ ahụ na-ere ọkụ, nke bụ ụlọ nkwakọba ihe nke ndị na-ere ọkụ ọkụ, dị n'ofe Osimiri Moscow Ogige Gorky, nso na Stadium Luzhniki, nke kwadoro 1980 Summer Olympics na nke ikpeazụ nke 2018 FIFA World Cup. Ọnọdụ nke ọkụ na-agba ọkụ dị n'akụkụ ụlọ ahịa pyrotechnics nke akpọrọ 'Kaboom,' n'asụsụ Russian.
Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ atọ na otu n'ime ndị ọrụ ụlọ nkwakọba ihe merụrụ ahụ na ọkụ ahụ, Deputy Mayor Mayor Moscow kwuru na mgbede Satọde.
Ọkụ ahụ, nke gbasara ebe karịrị 5,000 square ụkwụ, chọrọ nnukwu ọrụ site na ọrụ mberede. Ejiri helikopta atọ na ụgbọ ọkụ ọkụ iji nyere ndị otu ala aka imenyụ ọkụ, yana helikọpta na-achọ mmiri si Osimiri Moscow iji wụsa ya na ụlọ ọkụ.
A chọpụtaghị ihe kpatara ọkụ a ozugbo.